रोनाल्डोले युभेन्ट्स छाडने। – Butwal Samachar
रोनाल्डोले युभेन्ट्स छाडने।
By Butwal Samachar	 Last updated Apr 20, 2019 0
एजेन्सी । इटालियन क्लब युभेन्ट्सका स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले सम्झौता अवधि नसकिदै क्लब छाड्ने तयारी गरेका छन् ।
युभेन्ट्स च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिएपछि रोनाल्डोले क्लब छाड्ने तयारी गरिरहेको इटालियन मिडियाहरुले जनाएको छ ।
इटालियन पत्रिका ला रिपब्लिकाले रोनाल्डो अर्को सिजन क्लबमा नरहने दाबी गरेको छ । क्लबलाई च्याम्पियन्स लिगको उपाधि दिलाउन नसकेपछि रोनाल्डोले क्लब छाड्ने मनस्थिति बनाएको ला रिपब्लिकाले जनाएको छ ।
स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडबाट युभेन्ट्स पुगेका रोनाल्डोको क्लबसंगको सम्झौता सन् २०२२ सम्म रहेको छ । तर, निकै महत्वकाक्षी रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनलबाट बाहिरिदा निकै निराश रहेको पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ ।
रियल मड्रिडलाई ४ पटक च्याम्पियन्स लिग जिताउन सफल रोनाल्डो युभेन्ट्सबाट नि च्याम्पियन्स लिग जित्न चाहन्थे । तर, डच क्लब आयाक्ससंग समग्रमा ३-२ ले पराजित हुँदै युभेन्ट्स बाहिरिएको थियो ।
च्याम्पियन्स लिगको बहिर्गमनसंगै रोनाल्डो युभेन्ट्सको वर्तमान टोलीसंग खेल्न इच्छुक नरहेको बताईएको छ । यस सिजन रोनाल्डोले युभेन्ट्सबाट सिरी ए को उपाधि भने जित्ने छन् । युभेन्ट्स सिरी ‘ए’ को उपाधिबाट एक जितले पछि रहेको छ ।
यस्तै इटालियन पत्रिका गजेट्टा डेल्लो स्पोर्ट्सले रोनाल्डोले क्लबसंग सन् २०१९/२० सम्मको सम्झौता गरेको जनाएको छ ।रोनाल्डोले च्याम्पियन्स लिग जित्ने संभावनालाई मध्ये नजर गरेर उक्त समयसम्मको सम्झौता गरेको पत्रिकाले जनाएको छ । यस्तै पत्रिकाले च्याम्पियन्स लिग जित्ने सम्भावना सकिएसंगै रोनाल्डो क्लबमा थप समय नबस्ने समचार लेखेको छ ।
कालो रङको स्याउ पनि आयो बजारमा, जसको मूल्य पत्याउनै मुस्किल!!
बम पड्काएर परिवर्तन हुन्छ भन्नु विप्लवको ठूलो भ्रम: प्रचण्ड
अब मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेले पनि हेलमेट लगाउनुपर्ने
लाइम एण्ड लेमोन क्याफे अब भरतपुरमा पनि
आशाको तेन्द्रोमा अडिएको जीवन!(कबिता)
भोलि बुद्ध जयन्ति: हरेक नेपालीले १/१ शेयर गरि बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो भनेर विश्वलाई देखाउनुस
© 2019 - Butwal Samachar. All Rights Reserved.